Lasa Sary Fihomehezan’ny Pro-Demaokrasia ao Hong Kong Ny Filoha Shinoa Xi Jinping sy ny Elony Vony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2014 22:14 GMT
Ny Filoha Shinoa Xi Jinping natao photoshop ho ao amin'ny sehatra iray ahitana mpanao fihetsiketsehana mifanandrina amin'ny polisy misahana ny rotaka ao Mongkok. Sary avy amin'i Arm Channel ao amin'ny Facebook.
Ny sary namboarina (natao photoshop) ahitana ny Filoha Shinoa Xi Jinping mitazona elo any amin'ny fihetsiketsehan'ny mpanohana ny demaokrasia ao Hong Kong indray no sary fampihomehezana ara-politika malaza ao amin'ny media sosialy.
Nanomboka izany tamin'ny alalan'ny fanambarana tao amin'ny televizionam-panjakana fa ny sary fitsidihana nataon'i Xi tao amin'ny Faritanin'i Hubei Province no nandrombaka ny lokan'ny fanaovan-gazety an-tsaripika ambony indrindra ao amin'ny firenena. Nitazona elo izy ary niresaka tamin'ireo injeniera sasantsasany ao anaty orana. Naforitra ny patalohany mba tsy ho lena:
Pic: Photo of President Xi Jinping visiting Hubei Province won China’s top photojournalism prize. pic.twitter.com/9ouNrb53aY
— CCTVNEWS (@cctvnews) October 23, 2014
Sary: Ny sarin'ny Filoha Xi Jinping mitsidika ny faritanin'i Hubei no nahazo ny lokan'ny fanaovan-gazety an-tsaripika ambony indrindra ao Shina.
Nanintona ny fifantohan'ny mpiserasera tao Hong Kong haingana dia haingana ny sary izay mahazatra raha amin'ny fanaovana propagandy politikan'i Shina tanibe manandratra kokoa ny sarin'ireo mpitondrany eny anivom-bahoaka. Namboarin-dry zareo sy natambany ny sary, ka nametraka an'i Xi sy ny elo mavony ho ao an-damosiny ireo toerana fanaovana fihetsiketsehana ao Hong Kong, ahitana ireo olona mivory mitaky rafitra manokatra malalaka ny fifantenana ny kandidà ho filohan'ny mpanatanteraka fa tsy miandry ny fifantenana ataon'ny komity izay ny mpanohana an'i Beijing no maro an'isa ary izay no rafitra isisihan'ny avy any amin'ny tanibe.
Ny filoha Xi eo amin'ny fonon'ny gazetiboky Time. Sary noforonin'i Andy Sum.
Mavesatra dia mavesatra ny fiampangàn'ny seha-pampitam-baovaon'i Shina Tanibe ny fihetsiketsehana farany teo, izay antsoin'ny media ao an-toerana hoe Occupy Central [bodoy ny foibe] ary antsoin'ny media vahiny ho Revolisionan'ny Elo, ho revolisionan-doko te-hanohintohina ny fahefan'ny fitondrana ao amin'ny foibe. Lasa loharanon-tokelaka manamaivamaivana ny fihenjanan'ny rivotra politika ilay sary fampihomehezana ahitana an'i Xi mitazona elo — ilay saimbôlin'ny fihetsiketseha-panoherana — .
Nisy sary namboarimboarina iray navoakan'ny gazetiboky amerikana Time eo amin'ny foniny ahitana an'i Xi mitazona elo ao anivon'ny etona mandatsa-dranomaso navoakan'ny 100most, gazetiboky ara-kolontsaina iray ao amin'ny Facebook, indray ka nahazo tiako mihoatra ny 10.000 ary nisy 800 nizara azy indray koa. Namoaka ny heviny tao anatin'ny fiketronana i Ivan Wong :
Tena mpitondra akaiky tokoa ny Filoha Xi : Nasehony tamin'ny 689 [milaza ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong antsoina hoe Leung Chun-ying izay nahazo vato 689 monja amin'ny 1200 mandrafitra ny komitin'ny fifidianana tamin'ny 2012] hoe ahoana no ifangaroana amin'ny fokonolona ao an-toerana sy mihaino ny hevitry ny olona miaraka amin'ny “elo, topimaso tahaka ny tena madio fo ary pataloha miforitra”.
Ny sary fampihomehezana eto ambany dia mametraka an'i Xi ho ao anatin'ny sehatra iray ao amin'ny Admiralty, toerana fototry ny fanaovana sit-in Occupy Central ao afovoan-tanànan'i Hong Kong:
Ny filoha shinoa Xi namboarina ho ao amin'ny toerana fanaovana fihetsiketsehan'i Admiralty. Loharanon'ny sary: Leung Pak Kin avy amin'ny Facebook 100most.
Nahatalanjona, nitatitra i Patrick Li fa nivoaka velona nihoatra ny 24 ora tsy voasivana tao amin'ny WeChat, fampihatra iray fandefasan-kafatra malaza ao Shina, ity sary fampihomehezana ity.
Ny elon'i Xi mifanandrina amin'ny polisin'ny rotaka ao amin'ny toeram-pihetsiketsehana tao Mongkok angamba no tena nanohina indrindra satria be olona be ao Mongkok, distrika ara-barotry ny sarangan'ny mpiasa ahitana fifandonana maherisetra saika isan'andro eo hatramin'ny nanombohan'ny sit-in tamin'ny 28 Septambra ka ifanandrinan'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana, sy ifanandrinan'ny vondrona mpanohana an'i Beijing amin'ny mpanao fihetsiketsehana manohana ny demokrasia.
Na dia eo aza ny fiezahan'ny polisy maro hanadio ny faritra, dia azon'ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny tsy fanaovana herisetra ny arabe ao Mongkok. Ny toerana fanaovana fihetsiketsehana ao Mongkok manko amin'ny ankapobeny no mahavantana ireo mpandray anjara avy amin'ny sarangan'olona antonontonony sy mahantra, raha mahavantana ny mpianatry ny kolijy sy ny mpampianatra ary ny mpiasa manampahaizana kosa ny ao Admiralty.
Mieritreritra ny mpiserasera Stephanie Lai fa raha mazoto tokoa ny hijoro miaraka amin'ny fokonolona eny ifotony tahaka ny hita amin'ny sarin'i Xi-ao-Mongkok ny manampahefana ambony, dia hamihina ny fiverenana mankany Shina ny olona ao Hong Kong.
Xi eo an-tampon'ny Lion Rock. avy ao amin'ny Facebook-n'i Tang Earthquake
Ny sary fampihomehezana nivoaka farany indrindra dia ahitana an'i Xi eo an-tampon'i “Lion Rock” na Vatolampin'ny Liona ao Hong Kong. Ny havoanan'i Lion Rock dia saimbôlin'ny fahazotoa-miasan'ny vondron'olona ifotony ao Hong Kong vokatry ny tantara foronina iray amin'ny fahitalavitra malaza nandritra ny 1970.
Tao amin'ny antsafa vao haingana nifanaovany tamin'ny New York Times ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao Hong Kong, Leung Chun Ying, no nandresy lahatra fa tsy hanaiky ny fanendrena avy amin'ny olom-pirenena ny governemanta satria ny sarangan'ny mahantra sy ny mpiasa no hanjaka amin'ny fifidianana. Ho setrin'izany dia nisy vondrona mpananika tendrombohitra iray nanapa-kevitra tamin'ny 23 oktobra hibodo ny havoanan'i Lion Rock ary nanantona sorabaventy milaza fa “Mitady ny tena safidm-bahoaka aho”.
Tsy vitan'ny hoe mampandeha lavidavitra kokoa ny Revolisionan'ny Elo ireo sary fampihomehezana ireo, fa fampahatsiarovana ihany koa ny anjara toeran'i Shina amin'ny hoavin'i Hong Kong. Naneho ny fiahiany ny sarambabem-bahoaka ny Filoha Xi. Ho tonga any amin'ny faniriana demaokratikan'ny vahoakan'i Hong Kong ve izany fiahiana izany?